IApartment 3 yabantu ababini - I-Airbnb
IApartment 3 yabantu ababini
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguNorbert
Malunga ne-30 sqm yendlu (eqinisekisiweyo F ***) yabantu aba-2
Ibalcony entle ejonge ngasentshona enombono weIsar kunye neeNtaba zeWetterstein, indawo yokungena eyohlukeneyo.
Indlu yethu yindawo efanelekileyo yokuqala yokuhamba kunye nokhenketho lweentaba, ukhenketho lwebhayisekile yeentaba, imidlalo yasebusika okanye ukuphumla nokuphumla.
Nceda uqaphele ukuba sirenta kuphela iindwendwe ngokomgaqo we-G2 okanye ngokweemfuno ezisemthethweni!
Malunga ne-30 yeemitha zesquare zeeholide zokuhlala abantu aba-2 abanegumbi lokuhlala / igumbi lokulala, ikhitshi kunye negumbi lokuhlambela. I-balcony entle ejonge ngasentshona
malunga ne-5 yeemitha ukusuka kwi-Isar, umnyango ohlukeneyo.
Indlu yethu yeendwendwe egcinwe kakuhle enezindlu zeeholide ezi-3 ibekwe kwindawo ezolileyo, ephantsi kwetrafikhi (isiphelo esifileyo) ngqo kwi-Isar.
Indawo yokuhlala ikwindawo ezolileyo kwaye inombono omhle wentaba kumgangatho othembekileyo, njengoko uqinisekisiwe yi-DTV eneenkwenkwezi ezi-3. Ixhotyiswe ngefenitshala ephucukileyo ephuculweyo, inekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo (umzekelo: isitovu sombane esineplate eninzi esineoveni, imicrowave, ifriji enegumbi lesikhenkcisi esineenkwenkwezi ezi-4, itoaster, iketile, umxube, izitya ezininzi).
I-SAT TV (i-HDTV), i-DVD player kunye nerediyo ye-stereo ziyafumaneka.
I-WLAN (uqhagamshelo lwendlu eyi-100 Mbit) equkiweyo, i-landline yomnxeba idityanisiwe. Indawo yokugcina yasimahla yeebhayisekile kunye neskis. Inkonzo yesonka, inkonzo yesiselo.
Indlu yethu yindawo efanelekileyo yokuqala yokuhamba kunye nokhenketho lweentaba, ukhenketho lwebhayisekile yeentaba okanye ukuphumla nokuphumla.
Ezona midlalo zibalaseleyo zasebusika, ukutyibilika ekhephini, ukutyibilika ezantsi eMittenwald, kufutshane naseTyrol naseSeefeld (Tyrol)
IMittenwald ineziko ledolophu elinomtsalane kwaye ibonelela ngezinto ezininzi zemidlalo ezingashiyi nto ifunwayo.
4.86 · Izimvo eziyi-103
IAlpenwelt Karwendel yi Eldorado yabakhweli beebhayisikile, abakhweli kunye neentsapho. Nokuba uhamba ngebhayisekile okanye uhamba ngebhayisekile, ukhwela intaba okanye ukhwela intaba, apha uya kufumana iincopho ezithembisayo, amadlelo achumileyo ealpine kunye namachibi amangalisayo aluhlaza-luhlaza.
Ebusika kukho ukutyibilika ezantsi kunye nokunqumla ilizwe elijikeleze iMittenwald nakwiindawo ezikufutshane zaseTyrolean skiing.
Njengomthandi wenkcubeko, uya kunandipha amasiko aseBavaria. Abantu baseMittenwald bahlala bejonge ii-asethi zenkcubeko yeAlpine kwaye bayakuvuyela ukukuvumela ukuba uthathe inxaxheba. Kukho izakhiwo zemveli ezipeyintwe ngabalandeli, iimpahla zokunxiba, kunye nemisitho yenkcubeko.
Umbuki zindwendwe ngu- Norbert
Indlu inesango lokungena elahlukileyo kwaye ifumaneka ngokupheleleyo kwiindwendwe.
Kukho izitulo ezi-2, itafile kunye neparasol kwibalcony.
Sihlala kwisakhiwo esikhulu.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Mittenwald